Ngwaọrụ ntanetị iji tinye ndabere ọcha na foto | Akụkọ akụrụngwa
Idozi foto bụ ihe ruru onye ọ bụla nwere ekwentị ma ọ bụ kọmputa nwere ike iru ma nke a na-enye anyị ohere dịgasị iche iche mgbe ị na-arụ ọrụ na foto. Gbanwe ndabere na-acha ọcha bụ ihe a rịọrọ ka ukwuu ndị mmadụ, mana ọ bụghị onye ọ bụla maara nke ọma nzacha ma ọ bụ ngwa ọ ga-eji iji nweta nsonaazụ a. Nzụlite ọcha na-enye foto foto na-agbanwe agbanwe ma na-enweghị ihe ndọpụ uche.
Na mgbakwunye na nke a, otu ihe kpatara ya nwere ike ịbụ na anyị chọrọ iji foto nke ọma iji ya na dọkụmentị, dịka DNI ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị iji ụdị ọrụ a maka foto profaịlụ ma ọ bụ avatars. N'isiokwu a anyị ga-egosi nhọrọ kachasị mma iji gbanwee ndabere nke foto anyị na-acha ọcha na usoro dị mfe.
1 Ngwaọrụ ntanetị iji tinye ndabere ọcha
1.1 Wepụ BG
1.2 Mwepụ AI
2 Ngwa iji tinye ọcha ọcha na ekwentị
2.3 Ime anwansị Blackras Editor
Ngwaọrụ ntanetị iji tinye ndabere ọcha
Nnukwu ngwa weebụ nke na-enye anyị nchịkọta akụkọ nwere ike ịmata ma ndị mmadụ ma ihe ma ọ bụ anụmanụ. Ọ ga-ewepu ndabere site na oyiyi ahụ na sekọnd ole na ole. Ngwa weebụ a dị mfe iji tinye ya na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ọ bụ ezie na ọrụ ya n'ịntanetị zuru oke, anyị nwere ngwa desktọọpụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, maka Windows, MacOS ma ọ bụ Linux. Nke a desktọọpụ ngwa na-enye anyị mma na ọrụ ihichapu ndabere nke otu ìgwè nke foto ozugbo.
Enwere ike jikọta ya na ngwaọrụ ndị ọzọ dịka Zapier nke anyị na-ahụ ụfọdụ plugins ndị ọzọ iji jikọta ya na nyiwe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe yiri nke ahụ maka vidiyo, otu onye nrụpụta nwere ngwa ọrụ iji kpochapụ ndabere vidiyo.
Ngwaọrụ ọzọ akọwapụtara iji kpochapụ ego bụ iwepụ AI, nke ọtụtụ bụ otu n'ime ihe kacha mma kemgbe ọbụghị naanị na ọ na-atụgharị uche iwepụ nzụlite kamakwa ọ na-agbakwunye nhazi site na ọgụgụ isi nke na-enye onyogho a agbanwe agbanwe na ọ nweghị ngwa weebụ ọzọ na-enye gị. Ihe si na nsonaazụ ya yitere ihe anyị nwere ike inweta site na onye editọ foto raara onwe ya nye, ihe a ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji foto arụ ọrụ nke ọma.
Na nkenke, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwa ngwa na Wepụ BG anyị nwere ezuru, mana ọ bụrụ na ịchọrọ nsonaazụ "dị mma", Mwepụ AI dị mma.
Ngwa iji tinye ọcha ọcha na ekwentị
Ọ bụrụ na anyị chọọ ndị editọ foto, anyị ga-ahụ ọtụtụ ebe anyị nwere ngwa ọrụ a, mana enweghị ọtụtụ nke ahụ mee ka ọ dịrị anyị mfe iji ha n’otu ntabi anya. Lee, anyị ga-akọwapụta ihe kacha mma na nke kachasị dị mfe maka ekwentị anyị.
Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu maka edezi foto bụ doro anya Adobe Photoshop, zuru oke maka kọmputa na edezi ekwentị. Ọ dị mfe maka aha ịpị mgbịrịgba n'ihi na mgbakwunye na ntinye foto ya nwere ngwa ndị ọzọ. Na mgbakwunye na itinye ọcha ọcha na foto, anyị nwere nhọrọ dị ka ihe ọkụkụ ihe oyiyi, itinye ihe nzacha, ịme atụmatụ onwe onye ma ọ bụ ịme akara mmiri.
Anyị nwere nsụgharị dị iche iche maka ngwa a, otu nke anyị na-ahụ nsụgharị maka Windows, nsụgharị maka macOS n'okpuru ndenye aha na ngwa maka mkpanaka mkpanaka ma android dị ka iOS. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa vasatail na, na mgbakwunye na ịnwe ngwa ọrụ na-enye anyị ọrụ a, na-enyere anyị aka ịme mbipụta dị mfe nke foto anyị, na-enweghị mgbagha nke a bụ nhọrọ kacha mma.
Foto Photoshop Express Editor
A na-arara ngwa a naanị maka ọrụ a, ọ doro anya na ọ kachasị gosipụtara ma ọ bụrụ na ebumnuche bụ na, n'agbanyeghị ọ na-enweghị niile elu edezi nhọrọ na Adobe nwere. Ọ na - enye gị ohere ihichapụ ego na - akpaghị aka site na ọgụgụ isi nke ngwa ahụ n'onwe ya. Na mgbakwunye, ngwa ahụ na-enye anyị ọtụtụ agba ọcha na mgbakwunye ọcha ma ọ bụ karịa karịa aghụghọ.
Ngwa ahụ na-enye anyị ọtụtụ ndebiri, mana anyị nwekwara ike iji onyonyo nke anyị gbanwee okirikiri wee mepụta ihe pụrụ iche. The ngwa dị maka ma gam akporo na iOS, Ọrụ ya dị oke mfe. Nke a na - enyere anyị aka ịmepụta PNG na onyonyo ma jiri ha maka idezi onyonyo. Anyị pụrụ ịhụ ya dị iche iche na nsụgharị na chọrọ na ya ukara website.
Ime anwansị Blackras Editor
Ọzọ dị ukwuu ngwa raara onwe ya nye naanị ihe e kere eke nke PNG na nzụlite ngwa nke foto anyị zuru oke maka ndị ọrụ iPhone. Ọ na-atụle site ọrụ ya a nnọọ fun na kensinammuo edezi ngwa. Ngwa ahụ dị mfe iji na njedebe ọ bụla na ngọngọ na-enweghị nwayọ ma ọ bụ ọdịda.
Ngwa ahụ na-eduzi anyị ka anyị wee nwee ike dezie foto anyị mfe, anyị nwere ike itinye uzo nzụlite iji mepụta PNG, ọcha ma ọ bụ nzụlite sitere na gallery anyị. Ọ na-enye anyị nnwere onwe idezi na idozi foto anyị masịrị anyị, na-agbakwunye nzacha ma ọ bụ retouching agba ha. Anyị kwesịrị ibudata ngwa ahụ na AppStore ma nwee obi ụtọ na ya kpamkpam n’efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji tinye ndabere ọcha na foto